DHAGEYSO: K/galbeed oo ka carootay weerardii Marayekanka ka fuleyeen Sh/Hoose |
DHAGEYSO: K/galbeed oo ka carootay weerardii Marayekanka ka fuleyeen Sh/Hoose
Female Viagra for sale, dapoxetine reviews.
Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhaliilay howlgalka ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka ay ka fuliyaan gobolka Shabeelaha Hoose.
Gudoomiye kuxigeenka Sh/Hoose Cali nuur Cumar ayaa tilaamay in weeraradi dhawaan Ciidamada is garabsanaya ee Marayekanka & Kuwa Kumaandooska Dowlada ay aysan iyagu waxba kala socon laguna soo wargelin.
Waxaa uu intaa ku daray Gudoomiyaha in habka loola macaamilayo Ay tahay mid aan wanaagsaneen iyaguna aysan dooneeyn in weraro gaadma ah inta lagu qaado Dagaalamayasha Ururuka Al-Shabaab dib looga soo laabto.
Dananaha & ujeedada Maamulkooda uu rabo ayaa wax laga weydiiyey isagoona ku jawaabay in ay doonayaan in weeraro toos ah lagu qaado baraha Ay ku sugan yihiin Dagaalamayaasha ururuka Shabaab Maadaama Ciidamaadii Xooga Dalka ee gobolka ay diyaar gareysan yihiin islamarkaana La dego goobaha laga saaro.
Waxaa uu sheegaya Cali nuur Cumar Gudoomiye Kuxigeenka G/sh/hoose in weerada ay ciidamada Maraykanka ah ay fuliyeen intiisa badan uu Khasaaro kasoo gaaro dad Shacab ah oo aan waxba galabsan.
Isgoo intaa ku daray in dadka kunool gobolka Sh/Hoose Shabaab ay dhibaato badan ku hayaan ,loona baahanyahay in dadkaas la gaarsiiyo dawooyin maadaam cuduro kala duwan ka dilaaceen Gobolkaasi.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa cidanka dowladda Soomaaliya iyo Kuwa Maraykan ah waxay howlgal ka fuliyeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Dowlada ayaa dhowr jeer oo here waxaa ay sheegtay in si dhaqso ah looga saarayo Dagaalamayaasha Hubeysan Ee Ururuka Al-Shabaab Gobolada iyo degmooyinka ay kaga harsan
yihiiin Koonfurta & Bartamaha Somaliya.